Xaaladda Welbeck oo walaac laga muujiyay - BBC Somali
Xaaladda Welbeck oo walaac laga muujiyay
9 Maajo 2016
Lahaanshaha sawirka PA
Image caption Danny Welbeck
Shaki ayaa ka taagaan in weeraryahanka kooxda Arsenal Danny Welbeck uu Englan uga qayb gali doono tartanka qaramada Yurub ee sanadkan 2016, kaddib markii uu lawga ka dhaawacmay ciyaartii ay la lahaayeen Manchester City Axaddii.
Tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa sheegay in uu ka walaacsanyahay dhaawacaas, wuxuu sheegay in uu baaritaan caafimaad mari doono Isniinta.
Tababaraha kooxda qaranka Englan, Roy Hodgson ayaa magacaabi doona 23-ka ciyaartoy ee uga qayb gali doona tartanka Faransiiska lagu qabanayo ee 12 May.
Welbeck ayuu dhaawac ka soo gaadhay jilibka bidix bishii April ee sanadkii 2015-kii, waxaana laga qalay bishii Septemper.
Ciyaartii kooxda Arsenal ay Axaddii la yeelatay Man City ayay barbaro keeneen iyaga oo iska soo mogay labo gool, taas oo noolaysay rajadii Arsenal ee ahayd in ay ka mid noqdaan afarta kooxood ee ugu dhibcaha wanaagsan xilli ciyaareedkan 2016 ee koobka